Egkekọrịta Ndị Ahịa bụ Igodo Gị Maka Ọganihu azụmaahịa Na 2016 | Martech Zone
Na 2016, nke ọgụgụ isi ga-abụ onye ndu na atụmatụ ndị marketer. Ha kwesiri ịma n'etiti ndị na-ege ha ntị nke ndị ahịa na atụmanya ndị kacha nwee mmekọrịta na mmetụta. Iji ozi a, ha nwere ike izipu ozi a chọrọ maka ndị otu a nke ga - akwalite ahịa, njigide na ikwesị ntụkwasị obi zuru oke.
Otu akụrụngwa teknụzụ dị ugbu a maka nkewa nghọta bụ mpaghara ndị na - ege ntị SumAll, onye na-enye data ejikọrọ nchịkọta. Ọrụ a na-eji data anakọtara site na ụlọ ọrụ karịrị 500,000 na ihe karịrị otu ijeri ndị ahịa. Ihe nchekwa data a buru ibu nwere ihe omuma mmadu na mmadu. Otu ụlọ ọrụ nwere ike bulite ozi nchekwa data email ha na nkebi ndị na-ege ntị ma nata okike, ọnọdụ, afọ, na data mgbasa ozi mmekọrịta.
Iji ozi a, ndị na - ere ahịa nwere ike mepụta mkpọsa ezubere iche site na ọtụtụ ọwa dị iche iche, dịka netwọkụ mmekọrịta, nyiwe mgbasa ozi, email, yana ọkwa enyemaka aka. Nkewa nke na-enye ohere ịmepụta ọdịnaya dị mkpa maka ndụ onye ahịa. Ozi email nke na-agba ndị nnata ume ka ha “soro anyị na Instagram” na-eme ka anyị nwekwuo nghọta karịa mgbe a gosipụtara na ha nwere opekata mpe akaụntụ Instagram. Ihe ị ga - eme "soro" wee chọọ pịa ma ọ bụ abụọ, kama usoro ntinye aka niile.
A bụ ihe ndepụta nke SumAll Nkebi nke ndi na-ege nti usoro na otu ndị ahịa ahịa ga-esi lelee nghọta ndị metụtara:
Otu ụlọ ọrụ na-ebugo listi email ya
The SumAll engine na-achọta akaụntụ Facebook, Twitter, na Instagram
A na-enyocha njikọ aka na mmetụta nke netwọkụ ọ bụla. Njikọ aka bụ oge onye ọrụ na-emekọrịta na saịtị mmekọrịta ahụ, na mmetụta bụ ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ.
Demographics na-adọrọ site na ịkpọgharị adreesị ozi-e na oke nchekwa data
Ngwaọrụ ahụ nwekwara ngalaba dị elu maka ndị ọrụ Twitter nke na-enye ndị ahịa ohere itinye ndepụta nke njikwa Twitter wee dọpụta ozi email na igwe mmadụ. Ndị na-ere ahịa nwere ike iwepụta akụ iji wulite Twitter na-agbaso obi ike na ha nwere ike mechaa gbakwunye ndị na-eso ụzọ ahụ site na nkwukọrịta ọtụtụ ọwa.
Ọ bụ ohere a ọtụtụ ọwa bụ isi uru nke nkewa ahụ. Ndị ahịa na-atụ anya na ahụmịhe na-agbanwe agbanwe ma na-arụ ọrụ, ma ha na akara na-emekọrịta site na Instagram ma ọ bụ site na nkata enyemaka nkata. Ngwaọrụ dịka Ngalaba Na-ege Ntị dị ike n'ihi na ọ nwere ike iduzi ndị na-ere ahịa na ogo nke njikọ onye ọrụ nwere ike ịnwe ọwa. Tụlee mmadụ abụọ, ma nwere akaụntụ Instagram, mana otu nwere ụmụazụ asaa, nke ọzọ nwere ndị na-eso ụzọ 42.4. Ọ bụrụ na a jikọtara abụọ a ọnụ na mkpọsa “Instagram”, a ga-enwe nsonaazụ ụfọdụ, mana ahaghị nke ọma. Ndị ahịa ahụ ma ọ bụ atụmanya nwere nnukwu ihe na-akwado ikike mkpọsa ahaziri ahazi na onyinye nkwado dị ka uru ha bara na chanel ahụ nwere oke.
Enwekwara ike iji ihe omuma nke ndi mmadu gwa ndi mmadu helpdesk, CRM na uzo ahia ndi ozo banyere ndi ahia. Dịka ọmụmaatụ, nkata enyemaka na nkata ekwentị nwere ike ịkpado ndị ọrụ ihe karịrị 100,000 ndị na-eso Twitter, yana ntuziaka maka onye ọrụ ahụ ka o nye ha azụmahịa ma ọ bụ nkwalite nkwalite Twitter. Ebumnuche a ka ezubere iche, ọ na-emezukwa mkpa ọtụtụ ndị ahịa ga-ahụ dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ndị na-ere ahịa na-enye onyinye dị otú ahụ na enweghị ntụpọ na enweghị ụzọ.
Nkewa dị otú ahụ na-agụnye afọ na ihe ọmụma gbasara mmadụ na-emekwa ka egwu AdWords dị ike, ebe ndị ahịa nwere ike ịkwado mgbasa ozi ha gosipụtara na ụfọdụ ndị ahịa. Nke a na-enye ha ụzọ ị ga-esi kwuo okwu na isiokwu bara uru, mana ọ bụ naanị ndị na-ege ntị ezubere ka ego a ghara ịrị elu.
Segmentation na-agbanwe karịa ihe ngosi dị mfe (afọ iri abụọ na iri atọ na ise na Massachusetts), banye n'ime mpaghara ọhụrụ nke gunyere omume mmekọrịta mmekọrịta na omume ndị ọzọ nke na-enye ndị na-ere ahịa echiche dị mma ma dịkwa mkpa maka ndị ahịa ha.
Bido na SumAll n'efu!
Tags: CRMFacebookhelpdesknkewanchịkọta mmadụnchikotaTwitter
Ọ bụ Dan Atkinson
Dane Atkinson malitere ụlọ ọrụ mbụ ya, SenseNet Inc., mgbe ọ dị afọ 18. companylọ ọrụ ahụ toro site na ijikwa ụlọ ọrụ Fortune 500 (WPP, Pfizer, Lucent) nye ọtụtụ narị ndị ọrụ na mpaghara atọ. Kemgbe ahụ, ọ nweela ọrụ ịga nke ọma dị ka onye na-ahụ maka teknụzụ ma hiwe, zụta ma ree ụlọ ọrụ iri na abụọ. Ya ọtụtụ technology na ahịa nka na-enyere anyị anapụta esiwanye ọgaranya ọrụ ahịa anyị. Na mgbakwunye na ọnọdụ ya dị ka onye isi ala, Dane na-arụkwa ọrụ dịka onye ndụmọdụ na onye isi na ọtụtụ ụlọ ọrụ teknụzụ na-eduga.
Lori Feldman kwuru
Jenụwarị 24, 2016, elekere 2:19 nke abalị
Dane, enwere B2B dabara na ọrụ a?